Hypoid bevel gearmotor for sale Hypoid gear gear
Soosaarista Hypoid bevel gearmotor iibka qiimaha
Hydeid Gear Motors
Gawaarida hypoid iibinta
Waxaan nahay soo-saare xirfad-yaqaanno ah oo ku shaqeeya matoorrada dhaldhalaalka jilicsan ee hypoid.
Soosaarka Gawaarida Hypoid
Soo saaraha matoorka qalabka 'Hypoid gear gear' oo leh buuq hooseeya iyo waxtar badan.
Naqshadeynta sanduuqa Hypoid gear
Hypoid Gearbox oo ka socota Sogears wuxuu bixiyaa ugu dambeynta waxqabadka iyo isku xirnaanta karti isku xirnaanta ee loogu talagalay codsiyada guuritaanka servo-ga sare.
Gaadhiga gaaska hypoid
Waxaan haynaa farsamooyinki ugu horreeyay ee cutubka looga jarayo been abuurka hypoid.
Hymoid bevel gearmotor iib ah
Xagasha midig Hypoid bevel gearmotor Sida caadiga ah waxaa loo adeegsadaa codsiyada baabuurta
Goobaha 'Custom Spiral Bevel Gears'
Waxaan soo saareynaa geesaha hypoid-ka oo leh noocyo casri ah, nooc aad u caansan oo ah dalabyo xawaare sare leh oo ubaahan dab badan.
Mashiinka gaaska lagu nadiifiyo
Ogaanshaha fallaadho godan oo ku sii kordhaya qalabka 'Hypoid gear' oo lagu rakibay matoorrada korantada
Ganacsade Hypoid alaabooyinka bevel
Mashiinka 'Hypoid bevel gearbox matoorrada' ama 'hypoid gear gearers', waa jiil cusub oo wax soo saar wax ku ool ah oo si madaxbanaan ay u soo saartay shirkadeena, kaas oo isku daraya tikniyoolajiyad casri ah gudaha iyo dibedda, Waxtarka sare, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka.
guryaha aluminium aluminium iyo 20CrMnTi loogu talagalay geerka gudaha. adkaanta dusha iliga waa 56-62HRC iyo dhumucda lakabka carburized waxaa lagu hayaa 0.3-0.5mm ka dib shiidi fiican. 120W, 180W, 250W, 370W, 550W, 750W, 1100W, 1500W Helical-Hypoid Gear Motor, Qaabka Cusub Qaabka Helical-Hypoid Geared Motor, Standard Flange Input Hypoid Motor.
Gelitaanka Caadiga ee Flange Gawaarida Hypoid Qalabka AC.
Dib-u-soo-dejinta Hypoid Gearbox ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa gudaha
Warshadaha dhoobada, Warshadaha muraayadaha, Warshadaha Cuntada, Warshadaha Mashiinka, Warshadaha Beer & Cabitaanka, Warshadaha Daabacaadda iyo dheehida, Warshadaha Dharka, Warshadaha Logoistics Bakhaarka, Mashiinnada ka shaqeeya qoryaha, qalabka ilaalinta deegaanka Warshadaha, Warshadaha maqaarka, Warshadaha Farmasiga
Adeegyadayada Gawaarida Gawaarida Gawaarida & sanaadiiqda
4.1.We waxaan bixinnaa Warqadda Xilliga 12.
4.2. Waxaan heysanaa kumanaan alaabada wax lagu yareeyo. Laga soo bilaabo Input Power 0.06KW ilaa 200KW, Ratio 1.3-289.74, Xawaaraha Soosaarka 0-1095rpm iyo Output torque 1.4-62800Nm. Waxay buuxin karaan dhammaan shuruudahaaga kala duwan ee warshadaha kala duwan.
4.3. Waxaan soo bandhignaa buugga macluumaadka loo yaqaan 'E-katatalog' ama waraaqda waraaqaha ah, si aad u dooran karto masawirka si fudud iyadoo loo eegayo shuruudahaaga
4.4.Waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad soo booqato warshaddeenna si aad u hubiso alaabadayada, waxaan kaa caawin karnaa inaad ballansato hudheelka ama tigidhada.
Maxey tahay u shaqeynta sanduuqyada Hypoid?
1. Qalabka Ugu Weyn
(1) Guriyeynta: aluminium aluminium oo laydhka u roon (cabbirka xNUMX illaa 27)
(2) Gawaarida gawaarida: 20CrMnTiH1 carbonizing & deminta daaweynta kuleylka waxay ka dhigeysaa adkaanta dusha sare ee geesaha inay ahaato ilaa 56-62 HRC, oo la sii daayo lakabyada carburization ee u dhexeeya 0.3 iyo 0.5mm ka dib shiidi saxda ah.
2. Rinjiyeynta Dusha kore
(1) Gubashada toogashada iyo daweynta khaaska ah ee sunta ah aluminiumka dusha sare.
(2) Ka dib fofoninta kadib, buufin RAL9022 qalinka cad ee qalinka.
Feejignow markaad rakibayso bokisyada Hypoid:
1. Kahor urursiga qalabka hypoid gaaska iyo qalabka farsamada, hubi in jihada wareegga shafka soo-baxa ee matoorka hypoid ay sax tahay;
2. Kahor intaadan isugu imaanin matoorka gaaska 'hypoid' mover mover iyo mover iyo aaladda, iska hubi cabbiraadda cabirrada dhexroor kasta oo wareegsan, fur, fur iyo marin muhiim ah si aad isaga ilaaliso waxqabadka 'Hypoid gear motor';
3. Gawaarida hypoid waa in lagu dhejiyaa qalabka farsamada si looga fogaado jilicsanaanta iyo gariirka;
4. Ka fogow ku-gaadhsiinta tamarta 'Hypoid gear' qorraxda iyo jawiga adag ee adag intii suurtogal ah;
5. Haddii waqtiga kaydinta gaaska Hypoid ay tahay bilaha 4-6, iska hubi in dahaarka shaabadu gebi ahaanba ku dhexjiray saliida saliida. Bushimaha saliidda lagu tolo waxaa laga yaabaa inay lumiso xargaha. Maaddaama bayaanku habboon yahay ay lagama maarmaan u tahay shaqada shaabadaynta saliidda, waxaa lagu talinayaa in la beddelo sumadda saliidda. ;
6. Dhamaan qaybaha caagagga ah iyo godadka kaadida weey wareejin karaan rinjiga;
7. Marka xarkaha godan iyo guntinta adag ee qalabka gaaska Hypoid ay midba midka kale ku xiran yahay, qaybta saliidda leh ee qiiqa waa in lagu daboolaa saliid saliid leh si looga fogaado in la gariqo;
8. Heerka saliida waa in la hubiyaa inta la isticmaalayo (sida godka muraayadda saliida ama daloolka furitaanka, moodal yar lama heli karo);
9. Markii la isticmaalayo matoorrada cusub ee 'Hypoid gear matters', kuma bilaabi karaan si buuxda, mana aha inay kordhiso culayska;
10. Markaad isticmaaleysid noocyo kala duwan oo matoorro toos ah oo kuxiran matoorka matoorka, haddii culeyska matoorku aad u weyn yahay, aaladda taageerada waa in la siiyaa;
11. Xaqiiji in ay jirto jawi hawo wanaagsan oo u dhow marawaxadaha gawaarida si looga fogaado saameynta kuleylka kuleylka;
12. Heerkulka heerka caadiga ah ee shaqada Hypoid gear motor waa -5 ° C illaa 40 ° C. Hadeysan aheyn xadkaan, fadlan la xiriir shaqaalaheena farsamada.
Bokisyada hypoid-ga waxaa loo kala saari karaa sida sanaadiiqda loo yaqaan 'bevel gearboxes'.
Xag-xagal qumman midig Hypoid gear gear
Qorshaha is haysta oo adag oo leh tartan tartan ah.
Kala doorashada ballaaran ee wax soo saarka.
Ku rakibidda si fudud oo leh waxqabad wanaagsan oo leh qulqulka soosaarka Qiimeynta 25 illaa 720 Nm.
Halkan ka hel faahfaahinta qiimaha jaban ee shirkadda iibisa Gawaarida Hypoid Gear. Hel faahfaahinta xiriirka ee alaab-qeybiyeyaasha, soosaarayaasha, dhoofinta, ganacsatada Hygeid Gears soo iibsashada Shiinaha.
Fadlan xor u tahay inaad na weydiiso